KEDU OTU ESI EME KA WINDO NIILE KWỤSỊ? - AZỊZA AJỤJỤ - 2019
Kedu otu esi eme ka windo niile kwụsị?
Na sistemụ arụmọrụ Windows nwere ọrụ pụrụ iche nke belata windo niile mepere emepe, n'ụzọ, ọ bụghị mmadụ niile maara banyere ya. N'oge na-adịbeghị anya, ya onwe ya gbara akaebe otu enyi si gbanyụọ windo na windo windo ...
Kedu ihe mere ị ga - eji belata windo?
Cheedị, ị na-arụ ọrụ na ụfọdụ akwụkwọ, tinyere gị mepee usoro ozi mail, ihe nchọgharị na ọtụtụ taabụ (nke ị na-achọ ozi dị mkpa), yana onye ọkpọ egwu na-egwu maka egwu dị mma. Ugbu a kwa, ị chọrọ faịlụ ụfọdụ na desktọọpụ gị na mberede. Ị ga-emegharị iji belata windo niile iji nweta faịlụ a chọrọ. Ogologo oge ole? Ogologo
Esi ewepu windo na windo?
Ihe niile dị mfe. Site na ndabara, ọ bụrụ na ị gbanwebeghị ntọala ọ bụla, na-esote bọtịnụ "Malite" ị ga-enwe akara ngosi atọ: ọkpụkpọ egwu, Internet Explorer, na ụzọ dị mkpirikpi maka iwelata windo. Nke a bụ otú o si ele anya (agba gburugburu na-acha uhie uhie).
Mgbe ị na - pịa ya - a ga - ebelata windo niile ma ị ga - ahụ desktọọpụ.
Site n'ụzọ! Mgbe ụfọdụ, atụmatụ a nwere ike ime ka kọmputa gị kwụsịkwa. Nye ya oge, ọrụ nchịkọta nwere ike ịrụ ọrụ mgbe 5-10 sekọnd. mgbe ị pịrị.
Tụkwasị na nke ahụ, egwuregwu ụfọdụ anaghị ekwe ka ị belata windo gị. N'okwu a, gbalịa igodo ọnụ: "ALT + TAB".
Wedata windo na Windows7 / 8
Na sistemụ arụmọrụ ndị a, nchịkọta dị yiri. Naanị akara ngosi ahụ ka a kpaliri gaa ebe ọzọ, na aka nri, na-esote ụbọchị ngosi na ụbọchị.
Nke a bụ ihe ọ dị ka Windows 7:
Na Windows 8, bọtịnụ belata dị n'otu ebe ahụ, ọ gwụla ma ọhụụ adịghị anya.
Enwere otu ụzọ zuru ụwa ọnụ iji belata windo niile - pịa nchịkọta isi "Win + D" - windo niile ga-ebelata ozugbo!
Site n'ụzọ, mgbe ị pịa otu bọtịnụ ahụ ọzọ, windo niile na-agbanye n'otu usoro ahụ dị ka ha dị. Dị ezigbo ala!